Fahamaizan’ny Bloc Amical II teny Ankatso
May ny alin’ny Sabotsy 19 Septambra tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany ny Bloc Amical II fonenan’ny mpianatra eny Ankatso . "Court circuit" no nahatonga ny loza
raha ny filazan’ireo nanatri-maso voalohany.
Hatreto , 70 ireo mpianatra tsy manan-kialofana sy rava fananana. Tsy nisy kosa ny naratra na ny aina nafoy.Nanampy tamin’ny famonoana ny afo ny avy ao amin’ny sampana mpamonjy voina. Nananosarotra ny famonoana ny afo noho ny tsy fahampian’ny pression sy fahasarotan’ny fahitana rano.
Nafindra amin’ny toerana vonjimaika moa ireto mpianatra tsy manan-kialofana ireto.
Tonga teny an-toerana nankahery ireo mpianatra traboina ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa , ASSOUMACOU Elia Béatrice sy ny Sekretera Jeneralin’ny Mesupres ary ireo solontena avy ao amin’ny kabinetra.
Tsy niandry ela fa tonga avy hatrany nankahery ireo mpianatra niharam-boina ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ary nizara vatsy sy kojakoja madinika entin’ireo mpianatra traboina miatrika vonjimaika ny andavanandrony mandra-pahatongan’ireo fanampiana samihafa.
Tamin’ny fidinana ifotony nataon’ny Minisitra ASSOUMACOU Elia Béatrice omaly no nanambaràny fa "efa ao anaty tetikasan’ny Ministera ny fampitomboana sy ny fanorenana trano fonenana ho an’ny mpianatra".
Ary efa tafiditra tao amin’ny LFR ny volana Jona lasa teo ny ampahany amin’izany koa trano fonenana 9 no haorina ary oniversite efatra no hisitraka izany ankoatra ireo campus universitaire hatsangan’ny fanjakana.
Noho ny zava-misy dia hafainganina ny fanorenana ka hanomboka alohan’ny faran’ny taona ny asa.
19 Septambra 202019 Septambra 202019 Septambra 202019 Septambra 2020
Liste institution mai 2019
913 visites par jour.